Sina Chine legioma fanamboarana sy orinasa | Nongchuanggang
Misafidiana akora vaovao, miaraka amin'ny loko mety sy ny hoditra mbola tsy simba.
Manadio sy mitsoka ny akora ao anaty rano mafana. Mandroboka ny akora mangatsiatsiaka amin'ny vahaolana maltose miaraka amin'ny ampahany isan-jato. Esory ireo akora voahosotra siramamy, esory tanteraka izany, ary aingana haingana be amin'ny -18℃. Afangaroy amin'ny laoniny ara-nofo ireo akora voafafaingana, miaraka amin'ny 120kg ao anaty vilany tsirairay. Ny hafanan'ny solika an'ny editeran'ny Lentinus dia 85 ~ 90℃ ary ny diplaoman'ny banga dia ambany -0.095MPa. Rehefa manendasa dia diniho ny lavaka fandinihana ary aidina menaka ao anatiny. Ny vokatra dia ampandrenesin'ny milina fanodinana entana 1500g vokatra ao anaty boaty vita amin'ny aliminioma. Mametraha deoxidizer kitapo, ary asio tombo-kase. Ny daty famaranana dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fifanarahana. Ny vokatra vita dia hotehirizina ao amin'ny trano fanatobiana entana, ary ny elanelana misy eo amin'ny rindrina dia mihoatra ny 20cm. Ny hamandoana eo amin'ny trano fanatobiana entana dia tsy tokony hihoatra ny 50%.
Sakafo voankazo sy legioma no sakafom-bary vita amin'ny legioma sy voankazo vao tsy ampy rano ao anaty fahantrana. Nahazo "Telo tsy miova" ny voankazo sy legioma - tsy miova ny lokon'ny vokatra, ny sakafo ary ny tsiro;
Tsy misy fihenam-bidy, tsy misy fitomboana - tsy misy nesorina tamin'ny vokatra afa-tsy ny rano; Ny vokatra dia tsy manampy afa-tsy tsiro; Sakafo avo, ambany tavy - ny rafitra fanaraha-maso kalitao HACCP iraisam-pirenena, ny fampiasana ny dingana mandroso avo roa heny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary ny fizotran'ny tsy fahampian-tsakafom-panafody, mitazona ireo singa mahavelona sy mamaky amin'ny voankazo sy legioma; Non-puffing sy non-frying - ny fizotry ny famokarana ny vokatra dia tsy misy puffing process, ary ny teknolojika fanarian-diloilo fandroana menaka maripana ambany dia ampiasaina hialana amin'ny fizotran'ny vokatra. Hafa tanteraka ny voankazo sy legioma raha oharina amin'ny sakafo puffed toy ny poti-ovy, ary ho soloina ny sakafo puffed toy ny poti-ovy ato ho ato.
Karazana Sakafo voankazo sy legioma, sakafom-bary
Karazana fitaovana Legioma mifangaro
Anaran'ny vokatra Sora legioma mifangaro
Teo aloha: Taro
Vovoka ovy mamy volomparasy